Wararka Maanta: Isniin, Jun 10, 2013-Maxkamadda Degmada Hargeysa oo Go'aan ka Gaartay Saddex Qof oo lagu eedeeyey inay faafinayeen Diinta Kiristaanka
Gudoomiyaha Degmadda magaladda Hargeysa, Garsoore Cabdiraxmaan Maxamed Mawliid, oo xukunka ka dib wax ka waydiinay kiiska saddexdan qof ee lagu eedeeyey fidinta diinta Kiristaanka ayaa sheegay in saddaxdan qof lagu soo eedeeyey fidin diinta kiristaan, haseyeeshee hal qof ku cadaatay dambigaasi, halka laba qofna xoriyadoodii loo soo celiyey.
“Saddexdan qof waxa lagu eedeeyey fidinta diinta kiristaanka, waxaana la soo bandhigya markhaatiyo iyo cajalado, haseyeeshee eedaysanaha koowaad ayaa lagu helay dambigaasi, waxaana ku xukunay laba milyan oo lacag ah iyo mustaafuris, hadii ay bixin waydana waxa loogu bedelayaa xadhig”ayuu yidhi Garsoore Cabdiraxmaan Maxamed gudoomiyaha degmadda Hargeysa oo u waramayey HOL.
Sidoo kale, xeer ilaaliyaha degmadda Hargeysa, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo isagu dacwadan ku soo oogay eedeysanayaashan ayaa sheegay in laba dumar ah iyo nin ay ahaayeen, waxaase maxkamaddu xoriyadoodi usoo celisay laba qof halka eedeysanihii kowaad ku heshay dambiga, isla markaana lagu xukumay laba milyan iyo in laga mustaafuriyo dalka.
“Eedaysanaashu waxay ahaayeen saddex qof, laba xoriyadoodii baa loo celiyey eedaysanaha kowaad ee gabadha ahayd waxa lagu xukumay mastaafuris iyo laba milyan oo ganaax, ka dib markii dambiga lagu helay”ayuu yidhi xeer ilaaliyaha dacwadan ku soo oogay.
Xeer ilaaliye Cabdiraxmaan Suulcayn wuxuu sheegay inay soo bandhigeen afar marag oo markhaati ah oo cadaynaya dambiga ay faraha kula jireen iyo 33 cajaladood oo iskugu jira kuwo CD ah iyo cajaladdo caadi ah oo iskugu jiray kuwo soomaali ah, Ingiriisi iyo Af Xabashi.
Sidoo kale waxa iyaguna goobjoog ka ahaa maxkamadda xubno ka socda Safaaradda Itoobiya iyo jaaliyadda Itoobiya ka joogta magaaladda Hargeysa, waxa kale oo goob joog ku ahaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Somaliland, haseyeeshee xeer ilaalinta oo aan wax ka waydiiyey in mudaddii ay dacwaddo socotay la soo faro galiyey iyo in kale, ayaa sheegay in aanay jirin cid soo farogalisay, isla markaana ay dacwadu ahayd mid madax banaan oo dadkuna ka soo qaybgalayeen dhagaysigeedda.
Si kastaba ha ahaatee, Dastuurka Somaliland qodobkiisa shanaad, faqradiisa kowaad, ayaa odhanaya Diin aan Diinta islaamka ahayn laguma faafin karo gayiga Somaliland waana xaaraan, sidoo kale qodobka ciqaabta guud ee 314 ayaa dhigaya in lagu xukumo laba sannno oo xadhig ah, sidoo kale Aayadda 33aad ee Suuratul Maa’id ee Quraanka kariimka ah ayaa iyaduna tilmaamaysa mustaafurinta qofka ku kaca fasahaadinta diinta islaamka, sidaa darteed isagoo garsooruhu adeegsanaya qodobadda dastuurka iyo Aayadda Quraanka waxa uu ku xukumay laba milyan oo dollar oo u dhiganta laba sanno oo xadhig ah iyo mustaafurin aanay waligeed kusoo noqon Karin dalka, haddii ay lacagtaasi bixin waydana waxa loogu bedelaya xadhiga, haseyeeshee ma jiro qodob si toos ah u tilmaamay in qofka caynkan oo kale u dhaqma wixii lagu xukumi lahaaa, sida darteedna waxa uu xeer ilaaliyuhu sheegay in aanay illaa xeerarkii hore ee Soomaaliya jirin qodob qabanaya qofka ku kaca fidinta Diinta aan ahayn diinta islaamka, haseyeeshee barigii hore la mustaafurin jirin iyadoo aan la soo marin maxkamadda, waxaanu tilmaamay inay tahay markii ugu horaysay ee qof diin kiristaan fidinaya la xukumo maxkamaddana la hor keenno guud ahaan Soomaaliya.